Forum serasera malagasy Fitsapam-pahaizana Baiboly (2) - Dinika forum.serasera.org
Fitsapam-pahaizana Baiboly (2)
Fitohizan'ny hafatra : Fitsapam-pahaizana Baiboly (2)
rhaj0 - 12/12/2017 19:59
Inty indray azany ny fanontaniana faharoa ho an'ireo "mahay Baiboly" (na défi hitsapana ny fahaizanareo Baiboly).
2- Iza moa i Thomas? Inona no maha-olombe (na tsia) azy @ Kristianisma.
tianabeloo - 13/12/2017 06:38
Izaho mba hamaly izay fantatro fa sady hametram-panontaniana koa :
- Thomas dia isan'ireo apostoly 12 lahy nofidian'i JK t@androny. Akama be an'i Matio satria toa izy roalahy no mpiara-dia foana.
Nisy tantara tadidididiko izay koa hoe rehefa hody any Jodia i JK dia noferan'ny mpianatra noho ny tahotra dia i Thomas irery no tongatonga be hoe izaho vonona handeha ho any na ho faty aza.
Lery amin'io ilay tsy nety nino ny fitsanganan'i razoky t@maty raha tsy nahita maso hono.
Azo alazaina ho "excès de zèle" anie izany ilay sarintsarim-pahavononana etsy ambony e :p
Fa ny fanontaniako dia ity : nisy sombin-tantara namakiako fa i Thomas dia voairaka hitory ny "filazantsara" tany @iny atsimon'i Inde iny (izay rehefa nokarohina kely dia nanondro an'ireo faritr'i l'Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Goa, Tamil Nadu, Télangana, Lakshadweep, Pondichéry....
Faritra izay raha ny fahalalako azy dia Hindou ny fivavahana any, ka tena nanao "kamikaze" tany ve lery sa nanao ahoana tokoa?
rhaj0 - 13/12/2017 13:28
Iieee... i Thomas no nanitatra hatrany India. Ka mety izy izany no narahin-dry Beatles ee
Fa eo @ 2.5% @ Karana 1 milliards no Kristiana. Misy namako Indiana izay ho'a, Abrahama no anarany, ary dia jejo ery izy tamiko, fa nataony fa K koa aho. Fa hitako ny vadiny, ary mbola tena mianjaika sari sns tsaratsara mihintsy izy.
Ho anareo TIA ny Kristianisma, ary mahay tsara io Baiboly io, dia ... fanontaniana manaraka indray ny ahy...
Ankoatry ny maha-apaostaoly 12 an'i Thomas, sy ny evanzelizasio nataony tany India, dia
inona koa no zavatra mivaingana nentin'i Thomas t@ Kristianisma??
Tianabeloo - 13/12/2017 15:28
Aleo miandry an'izareo kristianina na izay mahay fa tsy haiko indray izay, kamo koa aho handalina ny momba an'ilery ny tena marina :D
rhaj0 - 13/12/2017 15:34
Da miandry manantena koa aho ee
normalement izao, raha tena TIA sy mahay Baiboly ilay olona, dia excité be mihitnsy miresaka izany.. sahala @ ireny adala-na Harry Potter ireny ho'a ee.. hay h@ point sy virgule.
Fa mahavariana ny Kristiana eto @ serasera, fa asa ho'a ... ny fitiavana ve no tsy misy, sa tsy mahay Baiboly akoriny, na dia miondana sy ao foana isan-kerinandro raha kely indrindra.
rhaj0 - 13/12/2017 17:44
Ndana ange siritsiriho eny @ youtube ohatra ny Nasrani Christians of Kerala, ao India ao ee..
RAha misy TIA mandalina, (misy ve?), dia mbo tantarao hoe ahoana ny "kifombafombany" ao??
Satria ny gasy (sasany) koa, tany @ 1600s tany, araka ny notaterin'i Flacourt, dia nahalala ny Andrmntr'i Abrahama, ary Rahisa no niantsoany an'i Jesosy, RAmariama no Ikala Maria. Ka raha voatazona izay "kristianisman'ny Ntaolo" izay, dia mba nety toatoa ny ahoana ny gasy (sasany)?? TEna mba liana aho.
oops... toa TSY "Kristiana" indray anefa ireo Ntaolo ireo fa Moslimo, na hoe manaraka fampianaran'ny Moslimo, araka ny lovan-tsofiny tao. Marihina fa ny Moslimo dia manaja an'i Rahisa (Jesosy) sy Ramariama (Maria).
endriny - 14/12/2017 19:11
Ny baiboly kosa ange tsy mitantara ny tantaran’ny mpianatra hafa afa tsy I Paoly e. Fa andininy iray na roa ao amin’ny TV ihany no manasongadina ny anaran’ny mpianatra 12. Satria mpiandry toerana izy ireo tsy mpilalao.
rhaj0 - 14/12/2017 19:35
endriny Ny baiboly kosa ange tsy mitantara ny tantaran’ny mpianatra hafa afa tsy I Paoly e.
Simon, Andrew, James, John, Philip, Thaddeus, Bartholomew, THOMAS, James, Matthew, Simon, Judas
== i Paoly angaha "mpianatr'i Jesosy" akoriny????
rhaj0 - 14/12/2017 20:49
Entre-pa fa raha hanontaniana izao ny Kristiana (eto @ serasera ohatra) hoe, iza aby ireo Mpianatra 12, dia tena mino marimarina aho fa betsaka ny tsy mahay: iza koa izany Thomas izany, na koa hoe izany Bari-toa-le-meho izany.
Nefa anie, raha hanontaniana indray zareo hoe, iza aby no ekipa-pirenen'ny frantsay. Frantsay io an. Dia ho hitanao fa betsaka no mahay hoe iza i Thomas Lemar; ary mety hainy h@ lokon'ny kilaotin'ilery an...
tianabeloo - 15/12/2017 06:33
Ie, fantatro tsara i Lemar, Nike no mpikarakara ny akanjony :D
Miharena - 15/12/2017 12:04
Mbola misy koa ankoatry ny Apostoly 12 rehefa maty Jodasy Iskariota dia nisy an'i Matias tao. Avy eo rehefa nanenjika Kristianina i Saoly dia nisehoaNY dia lasa Apostoly Paoly. Dia rehefa mandeha ny fotoana dia nisy ireo Apostoly be dia be nifandimby nanaitra ny olona fa VELONA Jesosy ary mampitondra hafatra sy maneho ny heriNY hatrany ao anatin'izany.
rhaj0 - 15/12/2017 14:39
Hay kosa mba mahay ny ekipan'i Jesosy izany i Miiharena. Ka velabelaro eto azany ny fantatrao ny @ hoe:
inona koa no zavatra mivaingana nentin'i Thomas (sy ireo ekipan'i Jesosy) t@ Kristianisma??
i Paoly @ io ho'a fantatrao tsara izany fa TSY ao @ ekipa nasionalin'i Jesosy orijinaly an...
endriny - 16/12/2017 06:36
I Paoly re tsy Apostoly izany mihintsy ry Miharena a, fa mitovy amin'ny Tsaratsara fotsiny izy. Nisoratena ho Apostoly
Miharena - 16/12/2017 17:43
Iza ary no nampianatra an'i Paoly ireo fehin-teny be dia be azony ireo kanefa dia Jiosy hiringiriny tsy nahalala afa-tsy Torah izy.
Rehefa mpianatry ny Tompo mivantana tsy misy mpanelanelana dia izay no atao hoe Apostoly.
Ny solon'i Jodasy Iskariota aza dia nofidin'ny mpianatra fa tsy nantsoin'ny Tompo mivantana kanefa dia nolazaina fa Apostoly. Mety nahazo fampianarana tamin'ny Tompo koa izy izany.
Eto fotsiny isika no mila manavaka hoe ny Fanahy Masina sa Jesoa mivantana no nampiteny ireo rehetra ireo ny fitoriana nentiny avy. Fa izy rehetra Apostoly no aneken'ny olona azy.
rhaj0 - 19/12/2017 15:42
tena TSY mba manitikitika anao ve ry Miharena hoe, inona no nataon'ny ekipa nasionalin'i Jesosy orijinaly ???
Tsy mi-click amin-dry Miharena mihtnsy ny resaka fa efa tsara sesik'i Paoly ao ny coco-keliny
Miharena - 08/01/2018 10:30
Misy hamantarana azy hatrany hoe Jesoa no maniraka na tamin'ny andron'ny ekipan'i Jesoa tamin'izany na amin'izao fotoana izao.
Manamporofo ny fahaveloman'i Jesoa hatrany ny asa rehetra misy na aiza na aiza amin'izao fotoana ankehitriny izao.
stahtam - 11/01/2018 12:52
Entre parenthèse ity resako ity satria tsy izay no sujet. Tsy hisy Kristiana ho conscients mihitsy ny toerana misy azy (par rapport à leur bible) satria i Paoly (ilay Apostolin'ny Jentilisa) no inoany fa tsy izy 12 mirahalahy tena izy talohany (originaux). Porofo itony famaritana itony: "Iza ary no nampianatra an'i Paoly ireo fehin-teny be dia be azony ireo kanefa dia Jiosy hiringiriny tsy nahalala afa-tsy Torah izy" Matoa ry zareo tsy miresaka ireo 12 taloha ireo dia satria ilay n° 14 (Paoly) no nampahafantarina azy sy inoany. I Paoly no nanoloky (nisoloky) ny olona hihinana hena aterina @ sampy izay mifanohitra tanteraka @ torah ka tsy maintsy foronina sy ajoro ilay famaritana hoe ". Rehefa mpianatry ny Tompo mivantana tsy misy mpanelanelana dia izay no atao hoe Apostoly", mba hanamarinana ireo "apostoly" mitranga etsy sy eroa sy hanamarinana ny fananganna sectes eraky ny elakelan-trano.
Miharena - 11/01/2018 13:51
Araka ny tantara dia i Saoly no mpanenjika izay olona manaraka ny fampianaran'ny Apostoly 12. Fa nisehoan'i Jesoa izay efa niakatra any an-danitra dia lasa mpitory ny Anarany.
Mila tsaroana koa fa Matia dia nofidin'ny 11 sisa nameno azy ireo 12 indray. Ary nataon'ny mpianatra hoe Apostoly koa izy.
stahtam - 12/01/2018 06:05
Io mbola fanohana @ toko sy andininy io no porofo fa tena ao anaty inconscience tanteraka ny kristianisma. Raha ampitahaina @ Apokalypsy 21 mantsy io toko sy andininy io dia hipoitra ihany ny marina: 12 sa 13 sa 14 ny apostolin'ny Zanak'Ondry ? sa rehefa "niresahany" (na nampiresaka hoe niresahany) dia izy izay ?